LG Velvet 5G Na-enweta Android 11 Stable Update | Gam akporosis
LG Velvet 5G na-enweta Android 11 Stable Update
Amalitere na May afọ gara aga dịka otu n'ime ekwentị ndị siri ike nke ụlọ ọrụ na Qualcomm's Snapdragon 765G, the LG Velvet 5G, nke gosipụtara n'oge ahụ na sistemụ arụmọrụ nke gam akporo 10, na-anabata gị ugbu a ihe ngwanrọ ohuru nke na - agbakwunye gam akporo 11 wee bia na otutu obere ndozi ahụhụ na njikarịcha dị iche iche.
Ihe ngwugwu ohuru ohuru nke smartphone di n'etiti na-achokwa ime ka ihe omuma nke onye oru, ka ulo oru a kwuru. Ọzọkwa, ọ bara uru ikwu na mmelite a bụ OTA kwụsiri ike, ya mere ehichaala ya kpamkpam, ọ bụ ya mere na ọ gaghị eweta nsogbu ọ bụla.
LG Velvet emelitere na gam akporo 11
Dabere na ihe a kpọtụrụ aha na ndekọ mgbanwe na melite ozi, mmelite ahụ nwere dị ihe dị ka 2.2 GB, ya mere, anyị na-eche nnukwu OTA nwere ọtụtụ atụmatụ ọhụrụ.
Dị ka ọ pụta ìhè na ọnụ ụzọ GSMAsand, nke a na-enye ugbu a na gam akporo 11 OTA nke dị na South Korea, ụlọ nke LG, maka Velvet 5G na nọmba LM-G900N. The femụwe nwere software version G900N2C.
N'ezie n'ime ụbọchị ole na ole ma ọ bụ, ọ gwụchaa, izu ole na ole, a ga-enye ya na mpaghara ndị ọzọ, wee gazuo mpaghara niile na ụwa.
N’ịtụleghachi atụmatụ ndị dị na ekwentị a ntakịrị, anyị hụrụ na o nwere ihuenyo P-OLED nke 6.8-anụ ọhịa na mkpebi FullHD +, ihe ekwuru na mbụ Qualcomm Snapdragon 765G processor chipset, ihe nchekwa 6/8 GB Ram, ebe nchekwa dị n’ime 128 GB na batrị ikike 4.300 mAh nwere nkwado maka ịkwụ ụgwọ ngwa ngwa nke 25 W. O nwekwara 48 + 8 + 5 MP okpukpu atọ n'azụ igwefoto na 16 MP selfie sensor.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » LG Velvet 5G na-enweta Android 11 Stable Update
Huawei Mate X2 foldable smartphone iji malite na February 22: lee ihe anyị maara ugbu a